Nezvedu - Guangzhou Chengfeng Hama Industrial Co, Ltd.
Zvikamu Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited
kufamba kwechikepe nemhepo, kubatana uye kufambira mberi, kururama uye kubatsirana pamwechete, kutora mutoro!
kuve indasitiri mutyairi wepakati-yakakwira magumo magirazi ekugadzirisa, kuita mutsauko mukugadzirisa kwemunhu, uye kuita kuti zvigadzirwa zvedu zvive zvakakosha!
girazi redu rinobatsira pakurarama kwakachena uye kwakachena!
mhando, kushanda zvakanaka, kukosha, hunhu
Nhanganyaya Kambani Nhau
Iri zita rechiratidzo mubatanidzwa wemazita maviri evatangi vekambani CHENG naFENG avo nekuzvarwa ihama. Iyo logo inosanganisa mazita avo ekutanga uye akafananidzwa kuita butterfly chimiro. Izvo zvinoreva chirevo chechiratidzo ichi 'kubhururuka nemapapiro maviri ane simba, kubatana uye kumusoro kumusoro kuti uwane kurota'. Butterflies inosanganisirwa kubva kune gonhi kuita akasiyana mavara emaumbirwo, kubva kumapururufuru ari kubereka maruva, kubva kuhonye kufananidza kuva mapurugufuru, hupenyu hupenyu hunoenderera. Izvi zvinomiririra kuti bhizinesi redu riri kukura kubva kudiki kusvika kune hombe, nhanho yega yega yatinogadzira, kugadzirisa uye fananidzo kubva kuchizvarwa kusvika kuchizvarwa, uye tinosimudzira zvine mutsigo.
Iyi LOGO dhizaini inotangira kubva pazita rekubatana regirazi mukombe uye whiskey, inoshandiswa mu whiskey mukombe yakateedzana brand brand. Tsamba 'G' yakagadzirirwa kufanana nekutarisa kwekutarisa kwekutarisa kwetsamba yekutanga uye hexagon whiskey mukombe. Gare gare nekuda kwekukura kwekudiwa kwemusika, ikozvino yaiswa asi haina kuganhurirwa kune zvakazvimirira zvinyorwa zvemakapu ekofi, magirazi ewaini tsvuku, magirazi emukaka uye zvimwe zvinopihwa zvezuva nezuva zvemakapu egirazi. Izvi zvinonyanya kutengeswa nekutengeswa kuburikidza nepamhepo E-commerce mapuratifomu.